Dardaaranka Hore - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Xuquuqda Xubinta > Dardaaranka Hore
Dardaaranka hore wuxuu qorayaa dookhaaga daryeelka qoraal.
Dardaaranka hore waa amarro caafimaad oo qoran oo ku saabsan noocyada daryeelka aad rabto inaad hesho haddii wax dhacaan oo aadan awoodin inaad qof u sheegto rabitaankaaga caafimaad.
Amarka hore wuxuu kuu oggolaanayaa inaad go'aan ka gaarto daryeelkaaga caafimaad haddii ay dhacdo:
Mar dambe ma sameyn kartid go'aannada daryeelka caafimaadka
Uma sheegi kartid dhakhtarkaaga ama qoyskaaga nooca daryeelka aad rabto sababo kale awgood
Haddii aad rabto qof kale inuu go'aan ka gaaro daryeelkaaga caafimaad haddii aadan awoodin
Waa maxay Dardaaranka Hore?
Inaad haysato dardaaran hore waxay ka dhigan tahay kuwa aad jeceshahay ama dhakhtarkaagu kuu samayn karo xulasho caafimaad adiga oo ku salaynaya waxaad rabto. Waxaa jira laba nooc oo ah dardaaranka hormariska ah ee Gobolka Washington.
Dardaaranka daryeelka caafimaadka (sidoo kale loo yaqaanno Dardaaran Nolol ama Dardaaran Sare) waa tilmaamo qoran oo ku saabsan daryeelka caafimaadka ee aad rabto inaad hesho. Waxaa loo isticmaalaa go'aamada dhammaadka nolosha ee lama filaan ah haddii ay dhacdo inaad si daran u bukooto ama aad ku jirto xaalad daaq.
Awoodda qareen ee waara daryeelka caafimaadka. Kani wuxuu magacaabayaa qof kale inuu kuu sameeyo go'aanno caafimaad haddii aadan awoodin inaad adigu samaysato. Foomkani waa dukumiinti sharci ah waana inay saxeexaan nootaayo dadweyne. Waa inaad kala hadashaa waxa aad rabto ee ku saabsan daryeelkaaga caafimaad qofka aad u dooratay inuu yahay Awoodda Daran ee Qareenka ee Daryeelka Caafimaadka. Waxaad sidoo kale kala hadli kartaa rabitaankaaga qoyskaaga iyo dadka kale ee ku lugta leh daryeelkaaga. Awoodda Joogtada ah ee Qareenka waxay dabooshaa xaalado ka badan Dardaaranka Daryeelka Caafimaadka.
The Amarada Dhakhtarka ee Daaweynta Nolol Joogtada ah (POLST) foomka waxaa loogu talagalay qof kasta oo qaba xaalad caafimaad oo daran, wuxuuna u baahan yahay inuu gaaro go'aanno ku saabsan daaweynta nolosha adkeysa. Bixiyahaagu wuxuu isticmaali karaa foomka POLST si uu ugu matalo rabitaankaaga amarro caafimaad oo cad oo gaar ah.
Foomka Amarka Dhakhtarka ee Daaweynta Nolol Waarta (POLST)
Direct Dardaaranka Hore iyo Amarada Dhakhtarka ee Daryeelka Nolol Waara (POLST)
La hadal dhakhtarkaaga, qoyskaaga, saaxiibbadaada, iyo kuwa kuugu dhow. Go'aanada ku saabsan daryeelkaaga caafimaad qoraal ahaan ugu qor hadda. Waad joojin kartaa dardaaranka hore waqti kasta. Qorshahaaga caafimaadka, takhtarkaaga, ama isbitaalka ayaa ku siin kara macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dardaaranka hormariska ah haddii aad weydiiso.
Waxaad leedahay xuquuq cayiman oo ku saabsan dardaaranka hormariska:
Xaqa aad u leedahay inaad gaarto go'aannadaada ku saabsan daryeelkaaga caafimaad.
Xaq u leeyahay inuu aqbalo ama diido qalliin ama daaweyn caafimaad.
Xaq u leeyahay in la helo dardaaran hore.
Xaq u leeyahay inuu buriyo dardaaranka hore waqti kasta.
Haddii aad u maleyneyso in Faa'iidada Medicare ee CHPW ama adeeg bixiyaasheeda, qandaraasleyda, iibiyeyaasha, ama shuraakada ganacsi aysan raacin qawaaniinta dardaaranka hore, waxaad gudbiso cabasho.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Abriil 19, 2021